अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाइने, सबै पासहरु खारेज !!पुरा पढ्नुहोस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान नपाइने, सबै पासहरु खारेज !!पुरा पढ्नुहोस !
प्रधान-मन्त्री केपी ओली मंगल बारको बैठकमा कोरोना रोकथाम तथा निय न्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयो`जक ईश्व`र पोखरेल र सदस्य रहेका मन्त्रीहरुसँग रिसाएका थिए । ‘तपाईंहरुले खुकु`लो पारौं भन्नु भयो । यो भावनामा डुबेर निर्णय गर्ने बेला होइन’, प्रधान`मन्त्रीको भनाइ उद्धृ`त गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘मान्छे नै रहेन भने आर्थिक गतिवि`धि खुला गरेर के हुन्छ ? पहिला मान्छे बाँच्नुपर्छ ।’ मन्त्रिपरिषदले शुक्रबारदेखि ४४ प्रकारका उद्योग खोल्न अनुमति दिएको थियो । यस्तै सरकारी कार्याल`यहरुमा एक तिहाई कर्म`चारीलाई हा`जिर गरा`इएको छ ।